Jabuuti oo shaacisay inay lacago magdhaw ah siineyso Shirkada DP World. – Xeernews24
Jabuuti oo shaacisay inay lacago magdhaw ah siineyso Shirkada DP World.
18. Juli 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Jabuuti (Xeernews24.com)-Dowladda Jabuuti ayaa shaaca ka qaaday inay bixineyso lacago magdhaw ah oo ay siin doonto Shirkadda DP World oo muran muddo qaatay uu kala dhexeeyay.
Dowlada Jabuuti ayaa tilmaantay in magdhawgaasi uu noqon karo inka badan ama ka yar 500 Milyan oo dollarka mareykanka ah taa oo la bixindoono todobaadka soo socda.
Dowlada Jabuuti waxa ay tilmaantay in ujeedka magdhawga uu yahay si loo xaliyo murunka ka dhashay maamulka Dekadda Dooraale ee dalka Jabuuti.
Guddoomiyaha dekadaha iyo Maamulka Gobolka ee dalka Jabuuti Abuubakar Cumar Haadi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay diidan yihiin in gacan seddexaad ay ku lug yeelato wadahadal dhex mara Jabuuti iyo maamulka Shirkadda DP world.
Abuubakar Cumar Haadi, waxa uu intaa raaciyay in shirkada DP World laga doonayo inay la fadhiistaan Jabuuti ayna qaataan lacagta ay magdhow ahaan ogol yihiin inay bixiyaan.
Guddoomiyaha dekadaha iyo Maamulka Gobolka ee dalka Jabuuti Abuubakar Cumar Haadi waxa uu yidhi, “Waa inay annaga nala fadhiistaan, Qaataana Lacagtooda kadibna baxaan ahmiyada waa in la xaliyo khilaafka un”.
Sidoo kale, shirkada DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta ayaana arintaasi ku sheegtay inay tahay mid lagu jibinayo heshiiskoodii muddada 30 sano ah ee ku aadanaa dekadda Dooraale.
Dowlada Jabuuti waxay hadda sheegtay inay diyaar u tahay bixinta Magdhow-ga heshiiskii ay la galeen DP World, maadaama ay ka hor yimaadeen inay 30 sano maamusho dekadda Dooraale ee dalka Jabuuti.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/03/abuubakar-xadi-218x150.png 150 218 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-07-18 09:01:552018-07-18 09:07:16Jabuuti oo shaacisay inay lacago magdhaw ah siineyso Shirkada DP World.
Dhegeyso R/Wasaaraha Itoobiya Dr Aby oo si Cadho dheh uga hadlay Xasuuqa ay... Diyaarada Ethiopian Airlines oo 20-sanno kadib u duushay Asmara (Daawo Sawi...